२८ करोड राजस्व छली गर्नेको घर के यस्तै हुन्छ र ?
वीरगन्ज । ‘नेपालको कानुन दैवले जानुन्’ यो कथन त्यत्तिकै कथिएको होइन रहेछ । कुकर्म गर्ने एक जना त्यसको सट्टामा सजाय भोग्नुपर्ने अर्कैले । यो कथा सुन्दा कुनै चलचित्र हेरेजस्तो भान हुन्छ । उनी हुन्, २२ वर्षीय उमाशंकर रायभर । बारा जिल्ला निवासी सुकुम्बासी परिवारमा जन्मिएका छोरा हुन्, उमाशंकर । अहिले उनी २८ करोड राजस्व छलीको आरोपमा कैदीबन्दी जीवन बिताइ रहेका छन् । बाराको परवानीपुर गाउँपालिका– १, गौनहरी टोलको सुकुम्वासी परिवारमा जन्मेर गरिबीको चपेटामा हुर्केका उमाशंकरको कुनै ठूलो महत्वकांक्षा थिएन ।
उनकै एउटै ध्येय थियो-सुखका साथ परिवार पाल्ने । तर, आज उनी काठमाडौं स्थित नख्खु कारागारमा बिति रहेको छ । करोड रुपैयाँको नाम नसुनेका, वर्षभर लाख रुपैयाँ कमाउन धौँ धौँ पर्ने उनीमाथि २८ करोड राजस्व छलीको आ’रोप छ। उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले उमाशंकर माथि ‘नक्कली, जालसाजी तथा झू’टो मूल्य अभिवृद्धि कर बीजक बनाई राजस्व चुहावट गरेको प्रमाणित भएको’ भन्दै मुद्दा चलाएको छ ।
यदि, उच्च अदालतको आदेश बमोजिम उमाशंकरले ७५ लाख धरौटी तिर्न सकेका भए उनी कै’दी जीवनबाट मुक्त हुन्थे । तर, उनले त्यत्ति धेरै रकम कहाँबाट जुटाउन् । ‘जो सोझो उसैलाई घोचो’ भनेझैँ अहिले उमाशंकर यहीँ दलदलमा फसेका छन् । आफूले गर्दै नगरेको अप’राध नख्खु कार’गारमा भोगिरहेका छन्को हुन्, उमाशंकर ? मुलुककै आर्थिक राजधानीको रुपमा चिनिने वीरगन्जदेखि ३ किलोमिटर पूर्व बाराको प्रसौनी चोकदेखि करिब ४ किलोमिटर उत्तरतर्फ सडक छेउमै करिब ५० घर धुरीको सुकुम्वासी परिवारहरुको वस्ती रहेको टोल हो, गौनहरी टोल । त्यही टोलमा १२ धुर ऐलानी जग्गामा खपडाले बनेको कच्ची घरमा हुर्केका हुन्, उमाशंकर । सानैमा आमा गुमाएका उमाशंकरको घरमा बिरामी बुबा, दाजु–भाउजू, श्रीमती र सन्तान छन् ।
आर्थिक अवस्था कमजोर भएकोले दाजु सन्तोष रायभरको कमाईले मात्र घर परिवार चल्न नसकेपछि उनी विगत ६ वर्षअघि मोटरसाइकलको काम सिक्नका उमाशंकर काठमाडौं प्रवेश गरेका थिए । गाउँकै उमा शंकर सहनीको साथ लागेर १६ वर्षकै उमेरमा मोटर साइकल मेकानिक बन्ने सपना बोकेर काठमाडौं प्रवेश गरेका थिए, उमाशंकर । सहनीले उनलाई मोटरसाइकल ग्यारेजमा राम्रो काम लगाइदिने आश्वासन देखाएर नागरिकता ल्याउन भने । सहनीसँगै सर्लाहीको गोडैता – ८ स्थायी ठेगाना भई काठमाडौंको कोटेश्वर बस्दै आएका सरोज कुमार मिश्र पनि उनीसँगै साथमा आएका थिए । राम्रो काम लगाउने भने पछि उमाशंकरले सहनीलाई भोलिपल्ट नै नागरिकताको फोटो कपी बुझाए । त्यस दिन मिश्र र सहनीले थप कागजात पनि ल्याएका थिए । दुवैले भनेबमोजिम त्यस कागजातमा उमाशंकरले कुनै शंकाविना औंठाछाप लगाइदिए ।
बाराको सरकारी स्कुलमा कक्षा ५ सम्म पढेका रायभरले आफूले ल्याप्चे लगाइदिएका कागजात पनि पढेनन्। सानैदेखि बायाँ आँखामा समस्या भएका उनले राम्रोसँग शब्द र दृश्य पहिल्याउन सक्दैनन्। उमाशंकरका दाजु सन्तोष रायभरले भने धेरै कागजपत्रमा ल्याप्चे लगाएपछि जागिर पाइन्छ भन्नेमा औँधी खुस थिए । तर, कागजातमा औँठा छाप लगाएर हिँडेका सहनी र मिश्र फर्केर आएनन् ।
सहनीलाई पर्खेर बसेका उमाशंकरले परिवार पाल्न झापाको ट्याक्टर शोरुममा काम गर्न थाले । मासिक १८ हजार रुपैयाँ कमाउथे । २०७६ मा बिहे भएको उमाशंकरको २०७७ पुसमा छोरी जन्मिइन् । त्यसपछि थप परिवारमा आर्थिक बोझ थपियो । अझ आर्थिक स्थिति मजबुत पार्नुपर्ने भयो । र, उनी झापामै श्रम बगाइरहेका थिए। उमाशंकरमाथि राजस्व अनुसन्धान विभागले काठमाडौंमा ब्लुक्रस ट्रेडर्स र जेन सप्लायर्स प्रालि दर्ता गरी जा`लसा`जी तथा झू`टो कर बीजक जारी गरेर राजस्व चुहावट गरेको अभियोग लगाएको छ।
यी दुई कम्पनीमार्फत क्रमशः१५ करोड ८७ लाख ७ हजार र १२ करोड ३ लाख गरी २७ करोड ९० लाख रुपैयाँ कर छलेको अभियोग उनीमाथि छ। उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्चअदा`लत पाटनमा दर्ता गरेको अभियोगपत्रमा उमाशंकरले राजस्व छलेको भनिएको रकम बराबर जरिवाना साथै मु`द्दा फै`सला हुने समयसम्मको थप जरिवाना र पाँच वर्षसम्म कैद गर्न माग गरेको छ । खबर हाउस बाट
२०७८ माघ ९, आईतवार प्रकाशित 1 Minute 137 Views